Allo iyo Duo, labada codsi ee cusub ee Google ee beddelay Hangouts | Wararka IPhone
Allo iyo Duo, labada codsi ee cusub ee Google ee beddelay Hangouts
Iyagu waxay ahaayeen halyeeyadii ugu weynaa ee I / O Google ee maanta bilaabmay. Waxay u dhigantaa Apple-ka WWDC, waxayna soo bandhigaysaa barnaamijyada cusub ee softiweerka ah (iyo xoogaa qalab ah) ee Google ay soo bandhigi doonto sannadka oo dhan. Allo, codsi fariin, iyo Duo, codsi loogu talagalay wicitaanada fiidiyowga, kaas oo beddeli doona Hangouts dil toogasho ah, Codsiga ay Google ku sharadaysay muddo dheer iyada oo aan laga helin inuu ka hor tago kuwa la tartamaya.
1 Allo, oo ah barnaamij fariin casri ah
2 Duo, wicitaano fiidiyoow oo la duubay
3 Xagaagii loogu talagalay macruufka iyo Android
Allo, oo ah barnaamij fariin casri ah
Codsiga cusub ee farriinta Google ma noqon doono WhatsApp fudud, laakiin wuxuu dhexgeli doonaa kaaliyaha macmiilka ee shirkadda si ay wax kuugu fududaato oo uusan xitaa u qorin jawaabaha. Sidan oo kale, haddii qof kuu soo diro sawirka balanbaal, wuxuu si otomaatig ah kuugu soo jeedin doonaa jawaabta "Muxuu yahay balastar qurux badan!" kuwa kale, si aad si fudud ugu dooran karto midka aad ugu jeceshahay. Inta badan ee aad u isticmaasho Allo wax badan ayey kaa baran doontaa adiga iyo talooyinka wanaagsan ee ay ku siin doonaan. Haddii saaxiib kugu casuumo makhaayad, dalabku wuxuu xitaa kuu oggolaanayaa inaad si toos ah uga sii qabsato halkaas, iyadoon laga tagin. Ma jiri doonaan maqnaansho emoticons iyo istiikarada, iyo dabcan, bot. Xitaa waad lahadli kartaa kaligaa Allo, marka hadii maalin uun aad caajiso xitaa waad la ciyaari kartaa Allo.
Duo, wicitaano fiidiyoow oo la duubay
Duo waxay u noqon doontaa codsi kaabis ah Allo, sida tan oo kale, isgaarsiintaadu waa la kaydin doonaa. Xaaladdan oo kale, waa codsi loogu talagalay wicitaannada fiidiyowga ee leh astaamaha taas oo ku siin doonta adiga horudhac ah waxa wadahaagu sameynayo xitaa adigoon aqbalin wicitaanka. Inta soo hartay, warar yar oo dheeri ah ayaa ku jira codsigan oo Google doorbiday inuu ka sooco midka fariinta.
Xagaagii loogu talagalay macruufka iyo Android
Labada codsiba waa la soo bandhigay maanta laakiin Ma awoodno inaan ku raaxeysano illaa xagaaga, taariikhda saxda ah ee la bilaabay. Waan arki doonaa haddii Google awood u leeyahay inuu ka dhaadhiciyo adeegsadayaasha inay ka tanaasulaan farriimaha dhaqameed iyo codsiyada wada-hadalka fiidiyowga si ay u bilaabaan adeegsigooda, waana arki doonnaa waxa ay Apple noo hayso oo ah WWDC 2016-ka arimahan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Allo iyo Duo, labada codsi ee cusub ee Google ee beddelay Hangouts
BitTorrent wuxuu ku dhawaaqay BitTorrent Live, P2P oo telefishanka soo dejinaya
Apple TV wuxuu kasbaday Mareykanka gudihiisa